HTC One ME, ny voalohany miaraka amin'ny processeur vaovao Helio X10 | Androidsis
HTC One ME, ny voalohany miaraka amin'ny processeur Helio X10 vaovao an'ny MediaTek
Raha omaly dia nilaza taminay izahay fa ny mpanamboatra Taiwanese dia mieritreritra ny handray a andiana fitaovana vaovao izay hivoaka alohan'ny faran'ny taonaAndroany dia hitantsika ny fomba nanambaran'ny orinasa tamin'ny fomba ofisialy finday avo lenta finday finday vaovao ho an'ny ankohonany smartphone lehibe, ny HTC One ME. Izy io dia terminal avo lenta izay hampiditra ny processeur Helio X10 vaovao an'ny MediaTek.
Azo antoka fa ireo tao Taiwan dia tsy afa-po loatra tamin'ny mpanao chip Qualcomm rehefa nanapa-kevitra ny hametraka ny Snapdragon 810 ao amin'ny terminal misy azy ireo ny HTC One M9. Satria, araka ny tadidinao tsara, ity chip ity dia niteraka aretin'andoha ho an'ny talen'ny orinasa Taiwan noho amin'ny hafanana be loatra ny M9 SoC. Angamba izany no antony nanirian'izy ireo niloka tamin'ny fampidirana chips avy amin'ny marika Sinoa MediaTek.
Ity processeur vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa MediaTek, Helio X10 na antsoina koa hoe MT6795, dia SoC miaraka amina maritrano 64 sy valo cores afaka miasa amin'ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro 2,2 GHz. Ho fanampin'izay, nilaza fa ho afaka ny puce raketo horonan-tsary mihetsika miadana amin'ny 480 fps, mandrakitra indroa ny zana-kazo isan-tsegondra noho ny iPhone 6 an'ny Apple. Tokony hanana a tsaratsara kokoa amin'ny terminal, ary koa mampihena ny fanjifana angovo. Ity mpikirakira ity dia tonga mba hifaninana amin'ny Snapdragon 810 ankehitriny avy amin'ny Qualcomm sy Exynos S433 avy amin'ny Samsung Korea Atsimo.
Niala tamin'ny processeur MediaTek ary mifantoka indray amin'ilay fitaovana natolotry ny mpanamboatra monina any Taiwan ora vitsy lasa izay, hitantsika fa ny HTC One ME Nanjary fitaovana avo lenta izy io noho ireo fiasa lehibe ananany izay hiaraka amin'ny kinova farany an'ny rafi-piasa Android hatramin'izao, Android 5.0 Lollipop.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny terminal dia ho fampitaovana ao anaty puce vokarin'i MediaTek, ny Helio X10 na MT6795, lasa fitaovana voalohany nametaka ny mpandika hoy. Miaraka amin'ity SoC ity no ahitantsika ny faran'ny terminal Fahatsiarovana RAM 3 GB. Raha manohy mandinika ireo endri-javatra manan-danja indrindra amin'ity fitaovana HTC vaovao ity isika, dia hitantsika ny fomba fampitaovana ny tabilao miaraka amin'ny ekipa IPS an'ny 5,2 ″ santimetatra ary famahana ny QuadHD (2560 x 1440 teboka).
Mikasika ny fizarana sary azy, hitantsika fa, ny HTC One ME, dia hanana fakantsary aoriana 20 Megapixels miaraka amin'ny flash LED afaka mandray feo amin'ny 4K sy manao horonan-tsary mihetsika miadana amin'ny 480 fps sy fakan-tsary anoloana 4 MP mampiasa teknolojia UltraPixel. Anisan'ireo fiasa manandanja hafa hitantsika ny fomba hananany tahiry 32 GB ao anaty slot microSD card, LTE / 4G, mpandahateny BoomSound, DUAL SIM, sensor sensor ary a Bateria 2840 mAh.
Raha ny momba ny fitaovana fanamboarana azy dia hitantsika fa manana fefy vy miaraka amina polycarbonate izy. Ity fitaovana ity dia ho hita amin'ny loko telo samy hafa: volamena, volondavenona ary sepia. HTC tsy naneho hevitra momba ny vidiny fandefasana azy, na izany aza dia nanao izany raha ny fahazoana azy, ny tsena aziatika no voalohany nahazo ity havana vaovao ity avy amin'ny orinasa Taiwanese. Ireo tsena hafa, toa ny Eoropeana, dia mila miandry isika vao hahazo vaovao momba azy io raha hahitana raha misy ny fametrahana iraisam-pirenena ny HTC One ME vaovao na tsia. Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao momba ity fitaovana HTC vaovao ity ?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » HTC One ME, ny voalohany miaraka amin'ny processeur Helio X10 vaovao an'ny MediaTek
Pedro Lopez dia hoy izy:
very foana ny efijery mahasoa maro
Valiny tamin'i Pedro López
Netflix dia hipetraka any Espana amin'ny volana oktobra